Tag: ASCII ganda | Bonisa Top
Tag: "ASCII ganda"
Tag: ASCII ganda
Indlela uthayiphe GBP ganda uphawu (£) usebenzisa US keyboard, in Windows 10?
On a US sekhibhodi akukho ukhiye £. Ukuze uthole uphawu kuyadingeka cindezela inhlanganisela ethile key. Ukuze uthole uphawu £ ethile screen, ukwenza okulandelayo: Cindezela ukhiye ALT futhi uthayiphe 0163 Inothi: The above will only work using the number pad keys…
Indlela uthayiphe GBP ganda uphawu (£) usebenzisa US keyboard, in Windows 8 futhi Windows 8.1?
On a US sekhibhodi akukho ukhiye £. Ukuze uthole uphawu kuyadingeka cindezela inhlanganisela ethile key. Ukuze uthole uphawu £ ethile screen, ukwenza okulandelayo: Cindezela ukhiye ALT futhi uthayiphe 0 1 6 3 Inothi: The ngenhla umsebenzi kuphela usebenzisa…
Indlela To Windows 2 imibono BISH Jaishi